मध्यरातमा ‘सप्तकोशी’बाट उदायो सूर्य, मेयर र उममेयर दुबै जित्यो – Setosurya
काठमाडौं । मध्यरातमा आएको निर्वाचन मत परिणामसँगै नेकपा एमालेले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा स्थानीय तहको प्रमुखमा खाता खोलेको छ । सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी नगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवार उतम कुमार शर्मा विजयी भएका हुन् । उनले आफ्ना निकटम प्रतिस्पर्धी माओवादीका ध्रुव कार्कीलाई हराएका हुन् । एमालेका शर्माको ४३ सय ६१ मत आउँदा माओवादीका कार्कीको ३६ सय ९० मत आएको निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार लम्सालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उपप्रमुखमा पनि एमालेकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । उपप्रमुखमा एमालेकी आशा चौधरी ४४ सय ६२ मत सहित विजयी भएकी हुन् । उनकी निकटतम प्रतिस्पर्धी राज कुमारी चौधरी ३८ सय ८६ मतका साथ दोस्रो भएकी छिन् । योसँगै अग्रता हाँसिल गरेको संख्यामा कम भएपनि एमालेले नगरपालिकाबाटै आफ्नो विजय सुरुवात गरेको हो ।
एका बिहानै धनुषामा पनि उदायो सूर्य : बटेश्वर गाउँपालिकामा एमाले विजयी
बाटोमै हराए कार्यालय हिँडेका सात हजार कर्मचारी, खोजी गर्न कार्यदल
भारु प्रतिबन्धकाे असरः नोट साट्न कूटनीतिक पहल
पर्वतमा दुई राप्रपा एक भए , अध्यक्षमा भुसाल
रामचन्द्र पौडेल सवार गाडीमा बम प्रहार, एक जना सुरक्षाकर्मी घाईते
हेर्नुहोस निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ क्षेत्रको नक्सा (नक्सासहित)
४० तोला सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट उपसचिव समातिए
निर्मला हत्या प्रकरणमा खुल्याे नयाँ रहस्यः यस्ताेसम्म गरेछ प्रहरीले ! मेरो साथीले बलात्कार गरेर हत्या गरेको हो, मैले सघाएकी हुँ भन, नत्र त गइस्
प्रधानमन्त्री ओलीको आयो यस्तो कडा अभिव्यक्ति : न्यायाधीशले आँखामा पावर थपेर हेर्नु हुँदैन !
बम आतंकबीच सुनसरीमा मतदान : ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती
टोप बहादुर रायमाझीको खुलासाः भोटिङ नै गर्नु पर्दैन संसोधन विधेयक फेल खान्छ
संविधान विपरीत ल्याएको प्रस्तावमा एमालेले डटेर समाना गर्छ – तिमिल्सीना